Vangelis, Umbhali Windows 11 Iingcebiso, amaqhinga, Ukulungiselela indlela-kwiiVidiyo
Unokukhusela iifayile zakho kunye neefolda Windows 10 ngokufihla ifayile. Olu guqulelo lusebenza kakhulu xa ...
pCloud Black ngoLwesihlanu 2021 - 75% isaphulelo, umz.I-2 TB yobomi nge- € 245
IPCloud inomnikelo onomdla kakhulu kuLwesihlanu oMnyama ngo-2021. Unokukhetha phakathi kwe-500 GB ye-122,50 € ...
Unikezelo lwangolweSihlanu oluMnyama: Fumana i-Echo Dot e-2 (iGen. yesi-3) nge-€ 39,98
E-Amazon kukho i-2x Echo Dot yangoku (i-3rd Gen.) ye-39,98 €. IAmazon ilungele ukuqala uLwesihlanu oMnyama ngoku…
Ulawulo lweekhompyuter kunye nezixhobo eziphathwayo - zenza ntoni iinkqubo zesoftware zanamhlanje?
Iisistim ezisebenzayo ezinjengeWindows zisebenza njengonxibelelwano phakathi kwabasebenzisi kunye nehardware yabo. Ukuze usetyenziso lwekhompyuter lwenziwe ngokukhuselekileyo, kufuneka kuqinisekiswe ukuba ...
Emva kofakelo, iWindows 11 inefonti ezininzi. Ngaphantsi koseto ungakhetha ezi fayile zefonti kwaye ...
Ukuhlawula kwi-intanethi ngekhadi letyala - kukhuseleke kangakanani?
Ukuthenga kwi-Intanethi kudume kakhulu kunangaphambili. Abathengi abaninzi ngakumbi bathenga kwi-Intanethi, ukusuka kwimidlalo yekhompyuter ukuya kwiibrashi zamazinyo. Ibandakanyiwe...
ULwesihlanu omnyama lolona suku lufanelekileyo lwetekhnoloji kunye nabathandi bemidlalo. Ngezivumelwano ezininzi, uninzi lwazo zikwi-intanethi ...